China Robotic Pfuti yekuchenesa chiteshi Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
Arc welding robhoti
Mig welding robhoti
6 Axis Arc welding Robot 1450mm ruoko kureba NeMegmeet welding simba sosi
2000mm Mig welding robhoti ine Megmeet Ehave CM 350AR
Tig welding robhoti
Tig welding robhoti ine waya feeder
Laser welding robhoti
6 axis Mig welding robhoti yekuchengetedza rack
Kurodha nekuburitsa robhoti
Kutsikirira robhoti kune otomatiki dhizaini yekugadzira mutsara
Robhoti inodhinda yePress Machine
Plasma yekucheka Robot
Kuderedza Gear RV Reducer
Precision Reduction Gear RV-C series
6 Axis Mig Welding Robot Solution Yemagetsi Pole
Kurodha nekuburitsa Sisitimu yeCNC muchina neHonyen Industrial robhoti
Welding marobhoti application
Kubata marobhoti application
Yooheart 1450mm welding robhoti
diki 850mm 6 axis inobata robhoti
8 Axis Robotic Welding Workstation ine mbiri Positioner
Robotic Pfuti yekuchenesa chiteshi
1. Nguva pfupi yekuchenesa, kushanda kwakasimba
2. Kuzvigadzirisa kupedzisa kuchenesa maitiro pasina kushandiswa kwemaoko
3. Dzivirira matambudziko emhando anokonzerwa nekusvibiswa mukunama
Basa 1:Kucheka waya
Basa 2:Torch kuchenesa
Basa rechitatu:Pfaya mafuta
Torch yekuchenesa chiteshi
2. Kuzvigadzirisa kupedzisa kuchenesa maitiro pasina bhuku rekushandisa
3. Dzivirira matambudziko emhando anokonzerwa nekusvibiswa mukatiwelding
Otomatiki yekuchenesa chiteshi chakagadzirirwa iyo robhoti welding pfuti uye otomatiki welding pfuti yakashongedzwa neotomatiki welding system.Kushanda kwemidziyo kunodzorwa nerobhoti, uye iyo midziyo ichapa inoenderana mhinduro chiratidzo kurobhoti.
Chiteshi chekuchenesa chinoshandisa reamer kutenderera kubvisa welding slag uye tsvina kubva welding Torch musoro uye welding Torch nozzle. Iyo yekuchenesa chiteshi ine yakazara mafuta jekiseni chimiro, iyo welding Torch musoro unogona kupfapfaidza anti-splash fluid mushure mekupedza kuchenesa, saka sekuderedza mukana wekubatanidzwazve kwe welding slag.Iyo zvakare yakashongedzerwa ine otomatiki waya yekucheka mudziyo, iyo inokonzereswa nemagetsi neiyo robhoti controller kana mechanically inokonzereswa ne welding torch.
Nhoroondo ye Technology Parameters
Oiri-isina mhepo yakaoma
Huwandu hwemhepo hunodiwa
10 litres pasekondi
Anti-splash jekiseni huwandu
Zvese zvemhando yepamusoro zvigadzirwa
1. Kuchenesa uye kugadzirwa kwejekiseni yemafuta munzvimbo imwechete yekucheka kwekucheka kweTorch yekuchenesa, robot inongoda chiratidzo chimwe chete kuti ipedze kuchenesa uye jekiseni yemafuta.
2. Nzvimbo yekuchenesa inongoda 6-7 seconds kuti ipedze nzira yose yekuchenesa, kana ichienzaniswa nemimwe michina yakafanana mumasekondi gumi nemaviri, iyo inoponesa zvikuru nguva yekuchenesa yebhoti uye inovandudza kushanda kwebhobhoti.
3. Iko kushandiswa kwea multifunctional reamer, kuchenesa torch kunogona kuve kumudzi weiyo conductive muromo chigaro chekuchenesa mhedzisiro.
4. Zvikamu zvikuru zvekuchenesa Torch wire yekucheka michina inodzivirirwa nehupamhi hwepamusoro casing, iyo isina kukanganiswa kwekuputika uye guruva.
5. Rudzi rutsva rwejojo ​​yemafuta muchiteshi chekuchenesa chetochi inodzorwa nerobhoti kuburikidza nevhavha ye solenoid.
6. Yakachengeteka uye yakavimbika atomizing anti-splash agent inogona kusvika pamudzi we welding torch musoro zvakanaka.Panguva imwecheteyo, iyo yakavharwa jekiseni remafuta inoderedza zvakanyanya dambudziko rekusvibisa mhute kana ichienzaniswa neyekare dhizaini.
7. Chigadzirwa chekucheka kwetambo chinotungamirirwa nevhavhavha ye solenoid, uye kucheka kwetambo kwakanyatsojeka.Iva nechokwadi chokuti tambo yakachekwa inowira mubhokisi rekuunganidza Inofananidzwa nemamwe mabhii emagetsi, magetsi emagetsi ari nyore kwazvo, zvinhu zvose zvekutonga zvinoiswa zvakachengeteka. mune iyo kesi, uye kune mashoma akafumurwa mapaipi
Zvese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
Official certified quality assurance
Q. Ko Nozzle yako yekuchenesa nzvimbo inogona kushandiswa marobhoti ese?
A. Hongu, inogona kushandiswa kune ese mhando yerobhoti, seKuka, Yaskawa, Fanuc, Abb, nezvimwe.
Q. Zvakadini nevoltage yewelding pfuti yekuchenesa chiteshi?
Q. Mangani maGun cleaner ekuwelding marobhoti anogona kupihwa mwedzi wega wega?
A. 100 ~150 mayunitsi mwedzi wega wega
Q. Torch yakachena chiteshi inoshandiswa pakucheka waya?
A. Ehe, nderimwe remabasa.inogona kushandiswa kugadzira Waya, kupfapfaidza mafuta uye kuchenesa tochi.
Q. pane chero zvikamu zvinodyiwa zverobhoti pfuti yekuchenesa chiteshi
A. anti-splash mafuta, wire cutter uye ream.
Zvakapfuura: Tsanangudzo yepamusoro China Six Axis 6kg TIG Robotic Welding Mini Robot Arm 6 Axis Automatic Machine Industrial Robot Arm ine 24 Mwedzi Warranty CE
Zvinotevera: Mutengo Wakanakisisa paChina 20kg Multifunction Six Spindle Mechanical Arm Welding Robot
pfuti yekuchenesa ye welding robhoti
Nozzle yekuchenesa chiteshi
welding pfuti yekuchenesa chiteshi
fekitari yakaderera mutengo China Monthly Deals Gadzirisa...
Best Price paChina 20kg Multifunction Six Spin...
Tsanangudzo yepamusoro China Six Axis 6kg TIG Robotic ...
1430mm kureba kweruoko inobata robhoti yekurodha ...
© Copyright - 2010-2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.